PressReader - Ilanga: 2017-10-09 - Ube yimpumelelo oweNdoni
Ube yimpumelelo oweNdoni
Ilanga - 2017-10-09 - Izindaba -
IKHIHLE isililo intokazi ephumelele umcintiswano weNdoni walo nyaka emcimbini obuse-ICC ngempelasonto.
Uthembise into yamehlo uzime walo nyaka weNdoni njengoba ethe akukuningi azokukhuluma ngomlomo kodwa abantu ake bathule babukele kancane. Isicoco salo nyaka sithathwe yintokazi esencane yaseMpumalanga, uAudrey Sikhosana (17) owenza ibanga le-12.
Le ntokazi imenyezelwe izolo ukuthi yiyo esinguzime weNdoni, idla umhlanganiso phakathi kwezintombi eziyishumi nambili ebezibheke lesi sicoco eziqhamuka eningizimu Afrika yonke.
Umcimbi uqale ngemuva kwesikhathi ebesibekiwe njengoba uqale sekuyoshaya ihora lesikhombisa okube yilapho kuphume isimemezelo sokuthi izihambeli azingene ngaphakathi ngoba umcimbi usuyaqala. Uhlelo beluphethwe ngesineke nguLebo Mashile ocacisele izihambeli ukuthi uhlelo luzohamba kanjani. Kuqalwe ngokuvezwa kosingaye, kwadlulelwa ekutheni bazozethula phambi kwamajaji abeklele ngaphambili. Kunemibuzo ebibhalwe phansi, iphethwe ngumphathi wohlelo obekumele ibuzwe ozime kanti uma beyiphendule kahle yilapho ikusasa labo belilele khona. Lezi zintokazi bezivunele ngokwezizwe zazo. Bekunesikhathi lapho beziqhathwa khona ngokuthi omunye akafunde ngokuthile kwesinye isizwe bese esho ukuthi yini ayiqaphelile ngaleso sizwe ebekuthiwa akafunde ngaso. UDkt Nomcebo Mthembu ongumsunguli weNdoni uvule inkundla ngokwethula inkulumo, ebingelela izihambeli eziqavile okubalwa kuzona uMnu Nathi Nhleko nambize ngosokhaya.
Enkulumeni yakhe uDkt Mthembu ukhwele wadilika kwabazishintsha ubuso ngoba befuna ukufana nezinye izizwe qede wadlula nakulabo abasebenzisa izinwele zokufakelwa wathi yizo lezi ezibadalela amabhadi. Isiqubulo ebesiphushwa kulo nyaka sithi “My heritage my pride”.
UNgqongqoshe wezaMasiko kuZwelonke uMnu Nathi Mthethwa obengomunye wabethule izinkulumo ugcizelele kakhulu ukuba abantu behlukane nokucwasana, bebizana ngamagama angemahle, ikakhulukazi kuba- ntu bokufika.
Ugqugquzele ukuthi abazali abazame ngokusemandleni ukufundisa ingane zabo ngezimpande zazo.
“Ngiyanincenga bazali fundisani ingane okuyikho, isizwe esilahlekelwe amasiko aso sifana nesizwe esingekho. Ngicela Indoni siyithande ngoba iyisikhumbuzo ngamasiko ethu," usho kanje.
Uphethe ngokubonga uDkt Mthembu ngephupho lakhe lokugcina izizwe zonke ziwazi amasiko azo futhi zihlangane.
Imikomelo yalo nyaka ibimi kanje: Uzime uthathwe u-Audrey Sikhosana (R100 000). Indawo yesibili ibangwe izintokazi ezimbili okungoNelisiwe Ndimande obemele amaZulu kanye nosinethemba Maphanga obemele amaSwati, bona bakhale bemuka noR50 000 umuntu ngamunye. Kulo mhlomulo ichazwe ngokuthi yonke izongena esikhwameni sesikole somuntu ngamunye. Nezinsizwa azisalanga ngaphandle njengoba uNkosinathi waseSwatini ethole uR5 000 wesigaba okuthiwa “uBuntu”. Kwabebengenele kodwa abangaphumelelanga umuntu ngamunye uzihlomulele uR5 000.
Uzime wangonyaka ophelile uThembelihle Mpofu waseMpumalanga wethule inkulumo emfushane qede wanikezela ngeReign okuyinduku egcinwa ngowinile unyaka wonke kuze kube khona uzime olandelayo
UDkt Mafika Lubisi oyimenenja eMnyangweni Wezamasiko eMpumalanga uthe: “Sibonge kakhulu ngokuwina kwendodakazi yethu. Kade besekhempini amasonto amabili belungisela lo mcimbi, uyingane ewathandayo."